Ọnụ Ọgụgụ | Martech Zone
Anụla m ka ndị mgbasa ozi mgbasa ozi a na-akwanyere ùgwù na-ekwu, sị, “Etinyela uche na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ ị nwere." na “ọ dịghị mkpa ole fans ị nwere". Ha ezighi ezi. Ọ bụrụ na ọ nweghị nsogbu, anyị agaghị agụta ha. Anyị gụọ ihe niileMa anyị na-ekpe onye ọ bụla ikpe site na ọnụọgụ ndị anyị hụrụ. Ka m kọwaa.
Ka ọ dị ugbu a, enwere ihe ndọghachi azụ na Klout na mgbanwe algorithm ha mere. Usoro mgbanwe nke ikike gbanwere ma akara ndị mmadụ Klout dara - ọtụtụ na-akụ maka ihe 10, ọtụtụ na-agbada ruo 20 isi. Klout na-agbachitere nkwaghari ahụ site na ịnye nzaghachi na mgbanwe algorithm ọhụrụ na-enye nkọwa ziri ezi nke mmetụta ntanetị n'ịntanetị.
Ndị mmadụ achọghị ịma ziri ezi. Ha na-eche banyere nọmba.
Enweghị m obi abụọ na nke ahụ Ebumnuche Klout dị ukwuu. Ntughari site na akara Klout n'izu gara aga na 71 rue akara Klout nke 61 n'izu a ihe ọ bụla ebe ọ bụ na nọmba n'onwe ya bụ nanị nha nke mkpa.
Otú ọ dị, eziokwu bụ na akara ọnụọgụgụ bụ ihe dị ọtụtụ ndị mkpa iji jigide mmetụta na mmekọrịta ha na ntanetị. Ọ bụrụ na Klout gbanwee algorithm a tuo n'otu oge n'ime ọnwa ole na ole, ha nwere ike ọ gaghị enwetaghachi azụ azụ. Ma ọ bụrụ na m na-akwado mgbalị m na onye yiri ya na akara ha nọgidere na-agbanwe agbanwe mana nke m dara… ọdịdị nke mma nke usoro abanye n’ajụjụ. Nke ahụ bụ ihe mere… na Klout na-agba mbọ igwu.
N'uche m, Klout gaara aka mma karịa ịba ụba n'ọtụtụ kama ibelata akara. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ahụ bụ 100 tupu, ha gaara eme ya ka ọ bụrụ 115. Ndozi a gaara eme mgbanwe ndị Klout ndị mmadụ na-abaghị uru. Enwere m olile anya na nke a gafere, m ka bụ onye na-akwado ihe Klout na-anwa ime (ọ bụ ezie na m ka na-eche na ọ bụ akara ele mmadụ anya n'ihu ebe ọ na-anaghị achọ nyocha ma ọ bụ nyocha okporo ụzọ).
Onu ogugu di nkpa
Ọ bụrụ na ị kwenyeghi na ọnụọgụgụ ahụ, ị ​​na-egwu onwe gị. Ọtụtụ mgbe, anyị nwere ndị ahịa nwere 0 Fans, ndị na-eso ụzọ 0, 0 retweets, echiche 0, 0 mmasị, wdg. Nsogbu bụ na e nwere ihe dị ka echiche 11 nke vidiyo.
Ọ bụ mmadụ ole na ole na-ewepụta oge iji lee vidiyo na nlele 11.
Yabụ, anyị mere ihe ndị ọzọ ga-akpọ nkwulu. Mgbe ọnwa ole na ole na ole na ole narị echiche, M wee pụọ na zụrụ echiche 10,000 na 1,000 nwere mmasị site na ọrụ. Ọ bụghị iwu na-akwadoghị ma ọ gaghị emerụ onye ọ bụla usoro ọrụ. Ọ na-ada ụda ata, ọ bụ ezie. N’ime izu abụọ, ọ kpaliri vidiyo Youtube ahụ ruo nlele 2. Otu izu ka e mesịrị, vidiyo ahụ na-anọdụ ala ugbu a karịrị echiche 12,000 na di na nwunye iri na abuo nwere mmasị. Otu vidiyo, otu ọdịnaya ahụ, na-agbakwunye echiche 2,000 kwa izu karịa ọtụtụ.
Ọnụ Ọgụgụ Na-emetụta Ndị Mmadụ
Ndị na - eso ụzọ ~ 50,000 nwere ike ịgbakwunye ụmụazụ 50 kwa ụbọchị na Twitter. N'ihi na onye ọhụrụ na Twitter, na-agbakwunye 50 na-eso ụzọ na a ọnwa ga-adị ukwuu… ma na na nke ahụ agaghị eme. Achọghị m ịma etu ọdịnaya ha si dị egwu… uto maka onye ọrụ Twitter ga-adị otosịrị ka ha na-eso ugbu a. Ọ bụrụ na ha chọrọ ime ka uto ha dịkwuo ngwa, ha kwesịrị ịbawanye ọgụgụ ha. Ọzọkwa, ndị ọcha ahụ ga-arụ ụka na ịzụta ndị na-eso ụzọ bụ egwu. Nke ahụ dịịrị ha mfe ikwu mgbe ha nwere ọtụtụ puku ụmụazụ.
Nọmba na-adịghị tinye
Nsogbu di na onu ogugu bu na ha adighi agbakwunye. Enwere m mmasị na ihe atụ dị n'okpuru account akaụntụ autofollow na Twitter. Ọ bụghị naanị na ọ nwere akara akara dị elu karịa m, ọ na-enwe mmetụta na Klout n'onwe ya (n'ụzọ na-enweghị isi, ọ na-emetụtakwa na ọrụ na ahịa ahịa).
De blọgụ ewu ewu na Nọmba
Itinye nọmba dị mfe. M na-echeta mgbe ọla edo ọkọlọtọ ka ewu ewu na a blog bụ gị Feedburner ọnụ ọgụgụ nke ndị debanyere aha. Gmail bịara ebe ahụ ma kwe ka ndị mmadụ nwee adreesị email na ikwu okwu na adreesị ozi-e. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na adreesị email m bụ name@domain.com, enwere m ike iji aha+1@domain.com, aha+2@domain.com, aha+3@domain.com, wdg Ndị na-ede blọgụ ole na ole jidere na nke a ma dee ederede iji debanye aha ọtụtụ iri puku ndị debanyere aha na email nke Feedburner nke ha.
Nsonazụ ahụ? A na-ewu ewu na blọọgụ ha n'otu ntabi anya. Offọdụ n'ime ha nwere ike ree mgbasa ozi na nkwado ha dabere na ọnụọgụgụ. Dị ka ule, azụrụ m blog post na otu n'ime blọọgụ m wee nweta narị narị nzaghachi site na blog ọtụtụ narị puku ndị debanyere aha. O gosipụtara enyo m enyo. Ha ebuola ọnụọgụ ha.
Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, blọọgụ m ka na-eto eto na ịgụ akwụkwọ. Ọ ghọwo blog mara mma site n'ụkpụrụ onye ọ bụla. Ma… blọọgụ ndị ahụ ghọgburu ka dị n'ihu m na ọtụtụ ogo saịtị. Ha nwere afọ ojuju ịkwado uto ahụ, yabụ ha mere nke ọma. I m akwa ụta n'ịghọ aghụghọ ule dị ka ha mere? N'ezie, ee. M na-akwa ụta. M gaara eji ohere ndị ahụ mee ihe mgbe ha bilitere.
Nwere Ike Zụta Ọnụọgụ Ọ bụla
Nwere ike ịzụta ihe ọ bụla. Ndị na-eso ụzọ, Fans, Retweets, Mmasị, Nnyocha peeji, Youtube echiche, Youtube mmasị… Enwere ọrụ dị na weebụ niile. M na-anwale a ton nke ndị a na usoro na ụfọdụ na-arụ ọrụ mma karịa ndị ọzọ. Ajuju a, n’uche m, abụghị ma ihe ndị a ha ziri ezi ma ọ bụ na ha abụghị… ajụjụ a bụ nke itinye ego. Nwere ike ịzụta nọmba n'ezie na-eme ka visibiliti na ewu ewu nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị n'ịntanetị? Oge ụfọdụ… na-adabere na ma ihe nkwalite gị na - enweta!
Enwere m ndị enyi m ụjọ na m akwụgoro maka ọrụ ndị a, mana otu izu ka e mesịrị, ha na-arịọ m ka m kwalite mmemme ma ọ bụ ngwaahịa ha nwere. Ọ dị mma n'anya… na-eche na ọ bụ n'ụzọ ụfọdụ n'ụzọ na-ezighi ezi omume ma na-eru mgbe ha nwere ike irite uru na ya.
I Kwesịrị Zụrụ Ọnụ Ọgụgụ?
Ekwetaghị m nke ahụ ịzụta nọmba na-ezighi ezi… ọ bụ a ahịa ego dị ka ihe ọ bụla ọzọ. Okwu a bụ ma ị ga - enwe ike ịba ụba na ntinye ego ahụ ma nye ọdịnaya nke nwere ike itolite ihe na - esote. Ọ bụrụ na i meghị, ego ahụ efunahụ gị. Enweghị nsogbu ọ bụla, ọ dịghị onye ọjọọ ọ bụla emere is ọzọ karịa obere akpa gị.
Cheta na: Ekwere m na ọ bụ wayo ịrere mgbasa ozi dabere na ọnụọgụ nke ịmara na ọ bụghị ezigbo.
Ọtụtụ mmadụ ga-ekwenyeghị m ike na isiokwu a. Gini bu mgbasa ozi na ire ahia na isi ya? Ọ bụrụ na ihe niile dabere na uto ahịhịa, anyị niile ga-akwụsị ọrụ na ụlọ ọrụ ahịa.
M na-achịkwa ewu ewu na omume ndị ahịa ma ọ bụrụ na m zụta fans? Ee!
M na-emegharị ewu ewu mgbe m goro a ọkachamara mmebe ịzụlite a ika ka o yie ka a ukwuu ibu ụlọ ọrụ karịa ọ bụ? Ee!
Re ahịa bụ maka ịzụlite foto na isi olile anya na ha chọrọ ọrụ gị. Ire ahia bu kwa iji udiri agwa ndi mmadu eme ihe bayere ahia. Enweghị m ike ịnyere aka na imirikiti ndị mmadụ anaghị etinye uche na ha obere onu oguguMana enwere m ike ịgbanwe ọnụọgụ ka ha ghara ị theya ntị!
Ahịa na-eme ka ndị mmadụ n'ọnụ ụzọ gị. Ọ bụ ọrụ gị setịpụ atụmanya ma gafee ha na ndị ahịa gị. Ọ bụrụ na ahịa gị setịpụrụ atụmanya ị nweghị ike idebe, mgbe ahụ ị na-agha ụgha ma ọ dị njọ. Mana ọ bụrụ na ịzụta ụyọkọ echiche Youtube, vidiyo gị malitere ịrịa, ma ị na-eresị ndị ahịa obi ụtọ ọtụtụ ngwaahịa maka ngwaahịa a, ọ bụ nnukwu azụmaahịa ahịa.
Ulo oru anyi n’ime oru ndi a dị ụkọ. Ọ bụ naanị mgbe anyị na mmadụ na-arụ ọrụ, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị ga-ama nke ọma na anyị ga-etinye ego. Ma ọ bụ mgbe anyị na onye ahịa na-arụ ọrụ chọrọ ịkwalite nkwalite ala ngwa ngwa. N'ọnọdụ niile, anyị na-ejikarị ọrụ ahụ eme ihe dị ka kickstart iji mee ka ha na-eto eto. Ozugbo ha toro, ọ dịghị mkpa ịga n'ihu.
Ọ ga - eju gị anya etu o si arụ ọrụ - M ga - agba gị ume ka ị nwalee ya n'onwe gị… zụta 5,000 nke ihe ma lelee otu o si eme ka uto di ngwa.
Ọkt 29, 2011 na 8:13 PM
Na-eme ka obi sie anyị ike. Ma olee maka ịzụta 5-kpakpando nyocha?
Ọkt 29, 2011 na 10:36 PM
Ihe isi ike bụ na ọtụtụ nyocha nyocha na-enye nyocha ngwaahịa ozugbo na bat. Ebum n’uche m n’elu bụ ka m nweta ụlọ ọrụ n’otu ebe ọha na eze ga-eweghara ọchịchị. Aga m agbakwunye na nke a abụghị naanị ụzọ anyị si eme ihe. N'iji nke nkwalite ndị a, anyị na-eme ezigbo nkwalite - na - arịọ ndị na - eme ihe ka ha mee nyocha banyere ngwaahịa a. Anyị na-adịghị akwụ ha ka ha na-agha ụgha provide anyị n'ezie nye ngwaahịa na ka ibe ịda ebe ha nwere ike. Ekwenyere m na nyochaa ngwaahịa bụ ihe nkwado karịa "ọnụọgụ" dị mfe.
Aga m agbakwunye, na ọtụtụ ndị anaghị aza nke ọma na nyocha 5-kpakpando. Anọ m na nnọkọ ogbako ọtụtụ afọ gara aga ebe ndị na-emepụta ngwaahịa kwuru na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nyocha 5-kpakpando kwụsịrị n'ezie ahịa. Ndị mmadụ zụrụ karịa 4-kpakpando ngwaahịa mgbe ha lechara anya na ihe na-ezughị oke gbasara ngwaahịa a. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-enyeghị ha nsogbu, ha ga-azụ.
Ọ bụ ihe ọzọ na-atọ ụtọ nke omume nke onye na-azụ ahịa.
Ọkt 29, 2011 na 11:06 PM
Daalụ maka nzaghachi echebara echiche. Ọ bụ eziokwu: enwere nsogbu nke ga - eme ka ịgafe tupu ndị bịara abịa ewere gị. Ndị na-eso ụzọ bụ uwe na uwe nke ahịa.
Ma m na-achọta ya otú ahụ… icky. Echere m ma ọ bụrụ na ndị mmadụ chere otú ahụ banyere mgbasa ozi mgbe nke ahụ na-emepebeghị? Dịka, “gịnị kpatara m ga - eji gwa ndị mmadụ etu ngwaahịa m si dị ukwuu, nke ahụ bụ ụgha?”
Ọkt 29, 2011 na 11:20 PM
Echere m na "icky" bụ ụzọ dị ukwuu isi kọwaa ya. Ọ dị m ka n’oge a ọ bụ ihe ọjọọ dị mkpa. Ọrụ ndị a na-agbawa… ya mere mmadụ na-eji ha!
Ọkt 30, 2011 na 8:35 AM
Aha ọrụ ịchọrọ & ọnụahịa?
Ọkt 30, 2011 na 4:55 PM
Nwere ike ịgwa m na m na-agbalị izere nke ahụ, Kenan? 🙂 Enwere m ihu ọma na Socialkik na Retweet.it - ​​ha abụọ na-ekwupụta n'ihu ọha ma nye nkwado na nzaghachi.
Ọkt 30, 2011 na 11:49 AM
Dịka onye ahịa na azụmaahịa m kwenyere na ọnọdụ gị gbasara ịzụrụ ihe mmasị, echiche, na + 1s dị ka itinye ego. E nwere ọtụtụ ọrụ ahịa na mpaghara na-abụghị dijitalụ na-eme otu ihe ahụ. Asọmpi nwere ihe nrite, na-eme nyocha site na mkpali, Kupọns - ihe ndị a niile bụ "ịzụta" oge, nlebara anya, na itinye aka.
Ma olee ebe e sere ahịrị ahụ? Omume ịzụta ihe mmasị, echiche, na + 1s nwere ike imebi ntụkwasị obi. Onye ahịa gị nke nwere vidiyo dị ịtụnanya ga-adị njikere ikwu n'ihu ọha na ha zụtara echiche ahụ? Echere m na azịza ya bụ mba n'ihi na onye ahịa ahụ nwere ụfọdụ ntụkwasị obi etinyere na ndị ahịa ha ugbu a na ha agaghị achọ ibibi.
Ihe atụ ọzọ: Enwere ike ịzụta nyocha Google Places na saịtị dị ka Fiverr (http://fiverr.com/ ) ma ọ bụ Elance (https://www.elance.com/ ). Onweghị ihe na - akụda mmụọ karịa ịnwe ọnụnọ na ịntanetị ma enweghị nyocha. Mụ, dịka onye na-azụ ahịa, ga-aga ahịa ọzọ na nyocha m na-achọ ebe m ga-eri. Mana ọ bụrụ na m hụ ụlọ oriri na ọ withụ withụ na nyocha m ga-agụ ha ma mee mkpebi. Ọ bụrụ na achọpụtara m nyocha ndị ahụ dere site na ndị na-enwetụbeghị nri ma ọ bụ zọọ ụkwụ na ebe m ga-atụkwasị usoro ahụ obi (ihe ndị ọzọ na echiche a na http://agtoday.us/vyVjXn)
Enwekwara iwu iwu ị ga-atụle: Lee ntuziaka US Federal Trade Commission (FTC) nke na-achịkwa nkwenye na ịgba akaebe (http://www.ftc.gov/opa/2009/10/endortest.shtm ). Enwere ike ịgbagha na ịzụta ihe mmasị bụ ịzụta nkwenye ma si otú a pụta ìhè. Ọ bụrụ na enweghị nkwupụta dị ka onye na-azụ ihe nọ n'ihe ize ndụ nke igosipụta ịgba akwụkwọ na iwu.
Dị ka onye ndu echiche (ee, a na m ewere gị dịka onye ndu echiche, ị nwere ike itinye akara ahụ na ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ gị :), a na-ele gị anya dị ka isi mmalite _trusted_ nke nghọta na nka. Na ị dere edemede a na-enyere anyị aka ịghọta ụdị aghụghọ nke mgbasa ozi, ịkpọsa, na mmekọrịta ọha na eze. M tụkwasịrị obi na ị na-agaghị azụ ihe na-amasị mgbe niile :)
Akụkụ nke akụkụ: enwere usoro mgbe niile / oke / usoro nke azụmaahịa kwesịrị ịtụle maka oge ịzụrụ iji nweta "oke nkwado ahụ" wee kwụsị ịzụta?
Ọkt 30, 2011 na 4:51 PM
Maka ndị folks nọ ebe ahụ na-eleghara echiche niile anya na ịzụta ndị na-eso ụzọ, wdg, adịghị mma, m ga-achọ ịnye ntụnyere nwere ike ịgbanwe obi ha. Anyị niile anaghị apụ apụ mgbe Budweiser, Coca Cola, Nike, Ford, nnukwu ụlọ ọrụ niile, na-emefu nde mmadụ n'otu mgbasa ozi maka Super Bowl. Ndi mgbasa ozi a "nweta" ikike ka egosiputa, dabere na ụfọdụ mgbasa ozi mgbasa ozi nke ewu ewu? Mba, ha zụtara ya. Nke bụ eziokwu bụ na anyị dị ka ndị ahịa na-eme ihe iji nyere ndị ahịa anyị aka, ndị were anyị n'ọrụ, na-ere ihe ndị ọzọ.
Anyị na-enweta ntakịrị oge Dr. Jekyll na Mr. Hyde oge n'ihe niile gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'otu aka, anyị na-achọ oge ụfọdụ ịchekwa ịdị ọcha nke ahụmịhe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mana anyị anaghị atabie anya mgbe anyị na-eji obere ọrụ azụmaahịa kachasị mma nke yiri ka ọ na-emebi mmụọ na ebumnuche nke ihe mgbasa ozi na-egosi.
Echere m na ọtụtụ ndị ọrụ ibe anyị ka amachibidoro n'echiche na ịnwe nnukwu ndị na-ege ntị na-egosi aha, ntụkwasị obi, na ihe ndị ọzọ niile.
Ọkt 30, 2011 na 4:53 PM
Anyị maara nke ọma na ndị na-azụ ahịa tọrọ atọ n'echiche ahụ, Marty!
Ọkt 30, 2011 na 8:19 PM
Kedu ka ọdịiche dị ka, RTs na + 1s na-azụta na-enyere aka niche ọrụ? Ọrụ ndị ị kwurula banyere ya enweghị ike ilekwasị anya na otu warara ọ bụla, kwuo dị ka obere anụ ụlọ anụmanụ ma ọ bụ ndị peditricians.
Thezọ maka ụlọ ọrụ niche ga-achọ iji ikike ịzụta maka ọnụ ọgụgụ sara mbara na-abawanye ebe ị na-emepe oghere na warara ụlọ site na usoro mgbasa ozi ndị ọzọ?
Ọkt 30, 2011 na 8:53 PM
Amaghị m na onye ọ bụla na-enyocha ebe retweets ma ọ bụ mmasị na-abịa, yabụ ejighị m n'aka na ọ dị mkpa ma ebumnuche ahụ bụ niche ma ọ bụ sara mbara. Enwere m uru nke ngalaba niche, echere m na ọ nwere ike ọgaghị atụ anya nnukwu mpịakọta dịka enwere isiokwu buru ibu.